पर्यटन भनेको के हो? | यात्रा समाचार
पर्यटन भनेको के हो?
मारिएला क्यारिल | | सुझावहरू, पर्यटन गन्तव्यहरू
के तपाईंलाई थाहा छ यो के हो? पर्यटन शिकार? यो नामबाट घटाउन केहि गाह्रो छ तर यदि म पशु र मान्छेहरूको बारेमा कुरा गर्छु ... के तपाईं विचार प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ?
शिकार पर्यटन पर्यटनको शिकार गर्दैछ। यो आज सबैभन्दा लोकप्रिय वा उत्तम प्रेससहितको नहुन सक्छ, वास्तवमा मृत्यु रमाइलो छैन, तर वास्तविकता यो छ कि यो अवस्थित छ र संसारका धेरै भागहरू छन् जुन यो प्रस्ताव गर्दछ र यसमा बास गर्दछ।
2 जहाँ शिकार पर्यटन अभ्यास गरिएको छ
3 स्पेनमा शिकार पर्यटन
यो पर्यटनको नाम हो जुन शिकारको वरिपरि घुमाउँछ र यसले हजारौं मानिसलाई, धेरै जसलाई धनी, संसारभरि नै सार्दछ। यो कानूनी हो र यसलाई अभ्यास गर्नेहरूले नियम पालना गर्नु पर्छ र मानदण्डहरू जुन यो मनन गर्दछ।
अवश्य पनि त्यहाँ सँधै कानूनहरू भ break्ग गर्ने र जनावरहरूलाई मार्ने मानिस हुन्छन् जुन संरक्षित प्रजातिहरूको हो वा जसले मौसमबाट बाहिर जान्छ, तर त्यो पहिले नै आपराधिक हो। जब पर्यटन कानूनी रूपमा पनि अभ्यास गरिएको छ यसले प्रजातिको संरक्षण र ती क्षेत्रहरूमा समुदायहरूको अस्तित्वमा मद्दत गर्दछ।
शिकार पर्यटन यो सबै दुनिया मा हो त्यसैले हामीले यो संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि दक्षिण अमेरिका र स्पेन हुँदै क्रोएसियासम्म भेट्यौं। हुनसक्छ तपाईंसँग अफ्रिकामा सफारीहरू छन् अधिक दिमागमा तर तपाईंले त्यो खेलको शिकार देख्नुहुनेछ जुन सबै कुरा पछि हुन्छ, जताततै हुन्छ।
त्यहाँ एक वास्तविक शिकार पर्यटन पूर्वाधार छ त्यो रसदको ख्याल राख्छ, अनुमति र यो सबै कुरा स्थिरता को रूपरेखा मा छ र खतरामा छैन। विज्ञहरू भन्छन् कि शिकार हाम्रो अवस्थाको अन्तर्निहित हो र यसलाई यति चाँडै यसलाई इतिहासको छातीमा छोड्ने एउटा निश्चित लालित्य र सीप छ।
विश्व पर्यटन संगठनले खेलकुद पर्यटन भित्र शिकार पर्यटन मानेको छ र यसले वातावरणको दिगोपनमा जोड दिईन्छ, अन्य प्रकारका पर्यटन जत्तिकै, व्यक्ति प्रकृतिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छ।
यो हिड्ने र स्मारिकाहरू खरीद गर्ने बारेमा होइन त्यसैले सबैसँग पैसा हुँदैन जुन यो खेलको अर्थ हो। विशेष गरी यदि तपाइँको खेल ठूलो खेल शिकार हो र तपाइँ अफ्रिका जानु पर्छ ... तर सानो तहमा वा माइक्रो तहमा यो खेल हो जुन प्रान्तहरू, ग्रामीण क्षेत्रहरूमा वा विश्वभरि धेरै टाढा रहेका देशहरूमा पनि अभ्यास गर्न सकिन्छ।
यहाँ महत्वपूर्ण कुरा राज्यको उपस्थिति हो जब यो नियमहरूको कुरा आउँछ किनभने हामीलाई थाहा छ कि यदि उसले मध्यस्थता गरेन भने पहिले के हुन्छ: प्रजातिको पूर्ण बेपत्ता। एक नियन्त्रित खेल शिकारको साथ प्रभाव विपरित र पनि हो प्राय: केही प्रजातिहरूको जनसंख्या नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिन्छ निश्चित संख्या भन्दा बढि को मामला मा तिनीहरूले अरूलाई आक्रमण गर्नेछन्।
राज्यको उपस्थिति पक्कै पनि हो अनुमति, को फिक्सिंग शिकार fixतुहरू, प्राधिकरण र कम्पनिहरु को नियन्त्रण को यो शिकार पर्यटन सेवा को प्रस्ताव।
साधारणतया शिकार पर्यटन सानो खेल, ठूलो खेल र पानी खेल मा विभाजित छ। पहिलो दुईले बाँधको आकार र दोस्रो प्रयोग गर्ने वातावरणलाई जनाउँछ। सानो खेलमा खरायो, कछुवा ढुकुर वा पार्ट्रिज समावेश गर्दछ, उदाहरणका लागि। ठुलो खेलमा जंगली सुअर, हिरण समावेश छ, र जलीय शिकार वेबबेड र wader वाटरफाउल.
अर्कोतर्फ हामीसँग छ विशेष गरी धेरै पैसाको साथ पर्यटकको लागि बजार सेट अप, आवास र सेवाहरूमा माग गर्दै, विशेष खेल शिकारीहरूको लागि अर्को र तेस्रो अर्द्ध-इन्फर्मल
विशेष खेल शिकारीहरू अक्सर चयन समूहहरूमा सर्दछन् जुन चयन प्रजातिहरूको खोजीमा स्थानहरू चयन गर्न यात्रा गर्छन्। अन्तिम समूहसँग त्यति पैसा छैन वा धेरै माग छैन र धेरै पटक तिनीहरू एक टुर समूह पनि भाडामा लिदैनन् र आफैंमा सर्छन्।
जहाँ शिकार पर्यटन अभ्यास गरिएको छ
अफ्रिकामाअवश्य। यो विशाल र धनी महाद्वीप पहिलो गन्तव्य हो जुन दिमागमा आउँछ र राम्रो कारणको साथ। त्यहाँ अफ्रिकी देशहरू जनावरहरूको भण्डारको साथ छन् र तिनीहरू आफैंले सफारीहरू आयोजना गर्छन् जुन शिकार गर्न वा नराख्न, अझ महँगो र अनन्य, सस्तो र सरल हुन सक्छ। कहिलेकाँही तिनीहरू सिकार हुन्छन् र अन्य समयमा यो केवल चरा अवलोकन गर्ने पर्यटन हो।
म बोल्छु तान्जानिया, क्यामरून, नामिबिया। म सिंह, हात्ती, gazelles, भैंसा, गोही, मृगको कुरा गर्दछु। कहिलेकाँही यो खेल अभ्यासको बारेमा हो र कहिलेकाँही यो विशेष गाईडहरूको साथ सिक्ने। परमिटहरू प्रशोधन गरिनु पर्दछ र त्यसपछि सिकार गर्न सकिने रकममा रहनु पर्छ वा शिकारको लागि आफै सेट गरिएको दिनहरू।
अफ्रिका छोड्दै अर्जेन्टिना दक्षिण अमेरिका मा, यो केहि समय को लागी एक शिकार पर्यटन गन्तव्य भएको छ। पाम्पा र दक्षिणी पाटागोनियाले जंगली डुars्गा, भैंसे, परेवा, बतख, बाख्रा, पमा वा एन्टलोपको साथ आफैंको प्रस्ताव राख्छन्। उत्तरमा बढी मेक्सिको जगुआरको शिकार प्रदान गर्दछ र यदि हामी चढ्न जारी राख्छौं तिनीहरू हुन् क्यानडा र संयुक्त राज्य अमेरिका.
भालुहरू, विशाल मुस, ब्वाँसोहरू, र अमेरिकी बाइसन उत्तर अमेरिका र अधिक मा मनपर्ने छन् अलास्का ध्रुवीय भालु र सानो सिलहरू शिकार गरिन्छ। वास्तवमा क्यानाडाले thousand०,००० भन्दा बढी सील पप्पल र लिन्क्सहरू एक कपाल नलगाईकन शिकार गर्न अधिकार गर्दछ।
एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा सुन्दर प्रकृति न्यूजील्याण्ड र अष्ट्रेलिया यो शिकार पर्यटनको लागि गन्तव्य पनि भएको छ र शिकारीहरू स्थानीय चितुवा वा हिरणहरूको खोजीमा त्यहाँ जान्छन्।
स्पेनमा शिकार पर्यटन
शिकारको धेरै इतिहास छ किनकी यसको मौसम र भूगोलको विशिष्टताहरू फरक इकोसिस्टम बनाउँदछन्, प्रत्येक आ-आफ्नै प्रजातिहरूको साथ। यो विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा बलियो छशहरहरूमा बसाईको कारणले कम जनसंख्या भएका क्षेत्रहरू।
केही स्थानहरू टिकाऊ पर्यटक शिकार र परिणाम राम्रो भएको छ किनकि प्रजातिहरू पुनर्जीवित भएका छन् कि विगत शताब्दीहरूको अन्धाधुन्ध शिकारले उनीहरूलाई हराउँदै गयो। अरु के छ त आयको स्रोत हो, thousand हजार भन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी उत्पन्न गर्दछ र २ 240० मिलियन यूरो सार्दछ, उदाहरणका लागि केवल क्यास्टिला-ला मन्चामा।
खेल शिकारका विभिन्न प्रकारहरू छन्: फिलेट्स, परानी र कुकुर र फेरेट, काउन्टर, सिलवेस्ट्रिस्मो, स्किप, धनुको साथ, गोलाकार, काउल र भाला। शिकारको शिकार गर्न र कब्जा गर्न प्रत्येकले फरक विधि प्रकट गर्दछ (रूखहरू, जालहरूमा वा जालहरूमा कुकुरहरू, फेरेट्स वा त्यस उद्देश्यका लागि प्रशिक्षित चराहरू, शटगन, बिरुवा) जस्ता जालहरू।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो भनेको शिकार पर्यटन भनेको सबैको बारेमा हो: सिकार, शिकारी, यात्रा, बास, नसामा एड्रेनालाईन र ट्रफी। चाहे बाथरूम बिना नै सरल पालमा सुत्ने, कुनै आकर्षक देशको घरमा, होटलमा, कुनै सम्पत्तीमा वा अफ्रिकी ताराहरूको मुनि लक्जरी शिविरमा, यी प्राचीन पर्यटकहरूले यी पर्यटकहरूलाई एकजुट गराउँछन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » सुझावहरू » पर्यटन भनेको के हो?
मानुएल सारसिनो सारसिनो भन्यो
छविहरू सुन्दर छन्
म्यानुएल सारारासिनो सारसिनोलाई जवाफ दिनुहोस्
शिकार पर्यटन को उन्मूलन गर्नुपर्छ र एक अपराध मान्नु पर्छ।
यो वास्तविक क्रुरता हो कि यस्तो क्रूर गतिविधि आज पनि जारी छ।
Wided लाई जवाफ दिनुहोस्
इगुआजु फल्स कहाँ देखिन्छ: ब्राजिल वा अर्जेन्टिनामा?
संसारमा १० सर्वश्रेष्ठ भूमिगत परिदृश्य